Afrika, 13 January 2020
Isniin 13 January 2020
Itoobiya oo doorasho 'qabaneysa' May ama June 2020
Itoobiya waxa ay May ama June qaban doontaa doorasho baarlamaan, inkasta oo ay jiraan walaacyo amni iyo kuwa farsamo, waxaa sidaas sheegay ra’iisul wasaare Abiy Ahmed intii lagu guda jiray booqasho uu Axadii ku tagay dalka Koonfur Afrika.
Al-Shabaab oo 3 macallin ku dilay weerar ka dhacay Kenya
Booliska Kenya ayaa sheegay in dabley la rumeysan yahay inay ka tirsan yihiin kooxda Al-Shabaab ay maanta saddex macallin ku dileen dugsi hoose oo ku yaalla bariga dalkaas.
Xabbad joojin lagaga dhawaaqay Libya
Xukuumadda Libya ayaa aqbashay maanta oo Axad ah xabad joojin ay dalalka Russia iyo Turkey ay ku booriyeen dhinacyada ku dagaalamaya Libya. Khalifa Haftar oo ah nin dagaal hubeysan kaga soo horjeeda xukuumadda Libya ee Qaramada Midoobe aqqoonsan tahay ayaa isna ku dhawaaqay in uu xabadda joojiyay.
Farmaajo iyo Afwerki oo ka wada hadlay iskaashiga labada dal
Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo ayaa booqasho laba maalmood ah ku jooga dalka Eritrea, halkaasi oo uu wadahadal kula qaatay dhiggiisa Eritrea, Issais Afwerki.
Kenya: Waxaan ka hortagnay weerar Al-Shabaab
AFRICOM oo baareyaal u dirtay Manda May
Milatariga Maraykanka ayaa sheegay inay baarayaal u direen saldhigga Manday Bay ee dalka Kenya halkaasi oo Axaddii lasoo dhaafay ay weerareen maleeshiyada Al-Shabaab.
Dadweyne billaabay inay ka guuraan Lamu
Qaar ka mida dadka rayidka ah ku nool deegaanka Lamu ee gobolka xeebta Kenya, ayaa billaabay inay halkaas ka guuraan iyagoo degaya xaafado yar yar si ay amaan ugu helaan.
Muxuu ahaa ujeedka weerarkii Al-Shabaab ee Manda Bay?
Al-Shabaab ayaa Axaddii weerar culus ku qaaday saldhigga ay adeegsadaan ciidamada Kenya iyo kuwa Maraykanka oo ku yalala gobolka LAMU.
Al-Shabaab oo afar qof ku dishay weerar ka dhacay Kenya
Afar qof oo rayid ah oo uu ku jiro canug ayaa toogasho lagu dilay maanta kadib markii kooxda Al-Shabaab ay isku dayday inay weerarto anteeno taleefon oo ku taalla bariga Kenya, meel ku dhow xuduudda Soomaaliya, sida ay sheegeen booliska.
Mareykanka: Iran Kuma Lug Laha Weerarkii Lamu
Warsaxaafadeed ka soo baxay Taliska Ciidamada Mareykanka ee Afrika ayaa lagu sheegay in weerarkii kooxda Al-Shabaab ay ku qaadday saldhigga ciidamada militeriga ee Manda Bay ee Gobolka Lamu subaxnimadii hore ee Axadda aanu ahayn mid ay ku lug leedahay dowladda Iran.
Aqoonsiga askarigii lagu dilay Manda Bay oo la shaaciyey
Qoyska askari Maraykan ah oo ku dhintay weerarkii shalay ka dhacay Manda Bay, ee ay qaadday kooxda Al-Shabaab ayaa xaqiijiyey geerida askarigaasi.
Maxaa Al-Shabaab u suurto-geliyey weerarkii Manda Bay?
Dowladda Maraykanka ayaa xaqiijisay in saddex muwaadin oo Mareykan ahaa ay ku dhinteen weerarkii shalay Al-Shabaab ay ku qaadday saldhigga Manda Bay ee gobolka LAMU.